IAddsense kaGoogle ngoku ukwenza imali ukondla kwam | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 25, 2008 NgoMvulo, nge-7 kaJanuwari, 2013 Douglas Karr
Kangangexesha elithile ndibalekile ukuthengisa ngokubambisanayo kwintengiso yam ndisebenzisa Iposi yeposi iplagi endiyiphuhlileyo yeWordPress kunye Commission Junction izibhengezo. Ibingengomthombo wayo nayiphi na ingeniso ebalulekileyo, nangona kunjalo, mhlawumbi iidola ezimbalwa ngenyanga.
Kule veki, ndifake isicelo ngeGoogle Adsense ukuguqula ukutya kwam ukusuka kwiFeedburner ukuya kuGoogle. Inkqubo yokwenza oku isencwadana yemigaqo, kodwa ungoyiki, awuyi kuphulukana nomrhumeli omnye kwinkqubo. Zombini iidilesi ziyaqhubeka nokupapasha ukutya, kodwa ukubeka ukutya kuGoogle inezibonelelo zemali kuba iya kukubonelela ukufikelela kwiGoogle Adsense yokutya.
Ngena ngokulula kwiakhawunti yakho yeAdsense kwaye ulandele umkhombandlela wokungenisa ngesandla ukutya kwakho ukuguqula. Kuthathe malunga neveki ukuba eyam iguqulwe. UGoogle uthembisa ukuba le iya kuba yinkqubo ezenzekelayo kwixa elizayo.
Akukaphelelanga, nangona kunjalo! Jonga le ntengiso ingentla evela kumbutho wezopolitiko oqaqambileyo odibene nenqaku lam malunga noJoe Biden. Inqaku elikhankanyiweyo yayiyinyani eyoyikisayo kwimbali ka-Biden yeminyaka engama-40 yokuvota kunye nomntakwabo omkhulu kwaye eshiya umfana omncinci ukuba axhome.
Andilindelanga ingeniso eninzi kwi-Adsense kwisondlo. Abantu abaninzi babiza nje inkqubo Webmaster Intlalontle.
tags: ifidigoogle adsenseukwenza imali
IWordPress kunye neMySQL: Lithini iLizwi lakho kwiLizwi?
Agasti 25, 2008 ngo-10: 18 PM
Ngokwenyani uDouglas ndineentengiso ze-RSS malunga neveki ngoku kwaye kwezinye iintsuku ndinengeniso engcono ukusuka apho kunokuba ndenza kwibhlog yeAdSense. Andiqinisekanga ukuba iya kuhlala ixesha elingaphezulu kodwa iqinisekile ukuba akukho nto okwangoku.
Agasti 26, 2008 kwi-7: 35 AM
Kumnandi ukuva! Ndijonge phambili ekuyiboneni isuka. Izolo ibiyi- $ 0.01, hehe.
Agasti 26, 2008 kwi-6: 43 AM
Ndiyibiza ngokuba yinhlalonhle ye-webmaster kuba "isinikezelo" ngokukuko kwaye ayisiyiyo kuba ayenzi ngqekembe efanelekileyo - i-rev yethu ngamanani ama-5 ngenyanga kuyo.